USOMABHIZINISI UKHIPHE UMASIPALA EHLAZWENI – Sivubela intuthuko Newspaper
Usomabhizinisi u-Ishwar Ramlutchman ehlaba isoyi kumuzi wakwaShobede kuWard 17 kumasipala uMlalazi
INJABULO usomabhizinisi waseRichards Bay enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal u-Ishwar Ramlutchman esiza imindeni emibili ngokuyithembisa ukuyakhela izindlu ezisesimeni emva kokukhala ngesimo abahlala ngaphansi kwaso.
Le mindeni yomibii okungeyaka Shobede eseMabhokweni, kuWard 17 kumasipala uMlalazi iphephandaba iSivubela intuthuko Ike yayivakashela yafica isimo singekho sihle.
URamlutchman uthe kuyathusa ukuthi kunabantu abasahlala ngaphansi kwesimo esifana nalesi. “Kubuhlungu ukubona abantu abahlala ngaphansi kwesimo esifana nalesi, ngiyafisa ukusho ukuthi asingagcini ngokugibela izimoto ezibizayo kodwa masisize labo abangakwazi ukuzisiza,” kusho Ramlutchman.
UZandile Shobede (35) ohlala nabantwana abahlanu kwindlu engurondo uzwakalise ukujabula ngalokhu akwenzelwe umsamariya olungileyo ngokuthembisa ukumkhipha osizini abahlala ngaphansi kwalo. “Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ekugcineni sizosizakala ngendlu esesimeni esikahle ,kwazise lena iyanetha Kanti akekho nosebenzayo layikhaya,” esho.
Le mindeni emibili izokwakhelwa izindlu ezinamagumbi amabili ezisesimeni esikahle. uMbongeleni Shobede naye ohlala nabantwana abayisithupha kwindlu yodaka uhluleke nawukuzibamba emva kokuhlatshwa kwesoyi lokwakhelwa indlu. “Lokhu okwenzekayo kuyisibusiso esivela kuNkulunkulu wethu, bekunzima kwazise nami angisebenzi ngibamba amatoho, futhi kumele nginakekele labantwana engihlala nabo,” kusho Mbongeleni.
Izindlu zalemindeni kulindeleke ukuthi ziqalwe ukwakhiwa Uma kuphela iLockdown yezinsuku ezingama-35 zokulwisana nokubhebhetheka kwegciwane iCovid-19.
Kanjalo noNomfundo Msweli we-Walk-Away Foundation okuyinhlangano eyahlonza lemndeni uzwakalise ukujabula nokubonga ngosizo oluqhamuke nosomabhizinisi. “Sifisa ukubonga ukuthi ekugcineni lemindeni isizakele, isizokwazi ukuhlala ngaphansi kwesimo esikahle ngosizo lukasomabhizinisi.” Kusho Msweli.